Bandhig Suggaaneed laba maalmood socday oo Qardho lagu soo gabagabeeyay. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Bandhig Suggaaneed laba maalmood socday oo Qardho lagu soo gabagabeeyay.
Bandhig Suggaaneed laba maalmood socday oo Qardho lagu soo gabagabeeyay.
August 26, 2018 - By: Mohamud Nadif
Waxaa magaalada Qardho labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday bandhig suggaaneed ay soo abaabuleen dhalinyarada Magaalada Qardho kasoo oo lagu marti qaaday dhalinyaro ka socotay gobolada Puntland, dhalinyaradaaan oo u badnaa suugaanyahano curiyay maansoonyin kala duwan , sidoo kale waxaa intii uu socday bandhigaan looga dooday sida loo horumarin aro afka iyo dhaqanka soomaaliga.
Abwaanadu suggaantii ay mariyeen intooda badan waxay diirada ku saareen sidii looga faaidaysan lahaa khayraadka dhulkeena yaala, ka wacyigelinta dhalinyarada tahriibka iyo mukhaadaraadka, sidii looga qaybqaadan lahaaa ilaalinta afka iyo adkaynta dhaqanka soomaalida.
Axmed Muuse Cali , Axmed Maxamed Jookar iyo Muno Cabdinuur Jaamac oo ku hadlayay afka qaban qaabiyayaasha bandhigaan waxay sheegeen in ahmiyada ay tahay sidii bulshada loo wacyigelin lahaa, sidoo kalena waxa ay sheegen in bandhigaan uu sanadkii 2aad socdo , sanadkaana ay martigeliyeen dhalinyaro ka socota gobolada Puntland, sanadka danbe ay rajaynayaan in ay martigeliyaan Suuggaanyahano ka socda Goboladda Soomaaliya oo Idil.
Saciid Maxamed Faahiye Gudoomiyaha waxvarashada degmada Qardho waxa uu sheegaay in ka wasaarada ahaan ay xooga saareen in sidii loo kobcin lahaa afka iyo dhaqanka soomaalida , weli ay wadaan sidii manhajka waxbarashada puntland ay ugu dari lahaayeen, Cabdi Saciid Cismaan Gudoomiyaha Degmada Qardho oo gabagabadii soo xiray waxa uu ku sheegay in ka maamul ahaan ay kaalin wayn ka qaadan doonaan socodsiinta barnaamijkaaan , waxa uuna u mahadceliyaydhamaan sugaanyahanadii kasoo qaybgalay bandhigga.
Halkaan ka dhagayso warbixin uu bandhigaas nooga soo diyaariyay weriyaha Horseed Media Qardho Maxamuud Nadiif Shire